Dadwaynoow Ka Garnaqa Idinku: Xaajada Murugsan Ee Xisbiyadasomaliland Isku Hayaan Waa Sidan – somalilandtoday.com
Dadwaynoow Ka Garnaqa Idinku: Xaajada Murugsan Ee Xisbiyadasomaliland Isku Hayaan Waa Sidan
Isku soo duuboo, murankan siyaasadeed ee hada taagani maaha sida ay wax u muuqdaan. Sadexda Xisbi Qaran waxay isku hayaan laba
qodob oo hore aan laysugu qaban sida manta laysugu hayo.
Qodobka 1-aadwaa Komishanka oo xisbiga Wadani leeyay hala kala diro isagoo go’aankaas ku salaynaya: komishankii Buugtiisa Ilaashan kari waayay, ee Dafiray, hadana Gudoomiyahoodii Qirtay inuu Buugoodii yahay dee adeer iima qaban karo doorasho xalaala.
Xisbiga UCID-nawuxuu taagan yahay: walaalayaal hadii 4% aydin markii hore isiiseen, doorkan hadan kulmiye ku raaco inaydin sii joogtaan, ma isiinaysaan inta wadani oo ah 49%, Wadanina ma siinaysaan 4% ? iyo Haa….Nacam bil-le!
Xisbiga Kulmiyenawuxuu taagan yahay: Inta Reer Sheekh Isaxaaq ay qayb libaax Somaliland hogaankeeda haystaan ayay Somaliland jiraysaa. Hadiiba Saamiqaybsi yimaado, Somaliland-na kala jajabtay!
Xisbiga UCID-nawuxuu taagan yahay, Kulmiyoow ma Afkaygaad kala baxday midhkaas !!!!!!!!!!!!